फाइबरग्लास रोलर ब्लाइन्ड्स कपडा निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन फाइबरग्लास रोलर ब्लाइन्ड्स कपडा फैक्ट्री
डबल रोलर ब्लाइन्ड्स फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडा
फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडा 40०% फाइबरग्लास र %०% पीवीसी विशेष प्रक्रिया मार्फत बनेको हुन्छ। यो हावामा ठोस कणहरू सोखाउँदैन र धुलोसँग मिल्दैन, जसले प्रभावकारी रूपमा धूलोलाई कम गर्न सक्छ। थप रूपमा यो एक प्राकृतिक खनिज हो र ब्याक्टेरिया वृद्धि वातावरण प्रदान गर्दैन। ब्याक्टेरियाहरूले पुन: उत्पादन गर्न सक्दैन र कपडा मोल्डे हुँदैन। यो हाम्रो जीवनमा व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ। उदाहरण को लागी, सार्वजनिक भवन (व्यायामशाला, भव्य थियेटर, एयरपोर्ट टर्मिनल, प्रदर्शनी केन्द्र), कार्यालय भवन, होटल (रेस्टुरेन्ट, अतिथि कोठा, जिम, बैठक कोठा) र घर (शयन कक्ष, अध्ययन कोठा, बैठक कोठा, बाथरूम, भान्छाघर, सूर्य कोठा) , बालकनी)।
हामीले बनाउने अधिकतम चौडाइ m मिटर छ। र मोटाई लगभग 0.38mm छ। फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडाको लम्बाई mp०mper रोल हो। प्रत्येक रोल कडा कागज ट्यूबमा प्याक गरियो।
रोलर ब्लाइन्डहरूको लागि इको-मैत्री एन्टिबाटीरियल ब्लैकआउट फाइबरग्लास कपडा
ब्ल्याकआउट फाइबरग्लास कपडा 40०% फाइबरग्लास र %०% पीवीसी विशेष प्रक्रिया मार्फत बनेको हुन्छ। यो भारी धातु र हानिकारक पदार्थहरू, सुरक्षित र पर्यावरण-मैत्री, कुनै अनौंठो गन्ध, मानव शरीरलाई कुनै हानि छैन, धेरै उच्च स्थिरता, सुरुचिपूर्ण र सुन्दर, र र matching मिलान आधुनिक सजावटको लागि उपयुक्त छ। यो व्यापक रूपमा विभिन्न वातावरण, जस्तै कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट र घरको लागि प्रयोग गरिन्छ।
ब्ल्याकआउट फाइबरग्लास कपडाको लम्बाई प्रति रोल m० मी छ। प्रत्येक रोल कडा कागज ट्यूबमा प्याक गरियो। गुणवत्ता परीक्षण शिपिंग अघि गर्नु पर्छ।
इको-मैत्री फाइबरग्लास कपडा घरका लागि १००% ब्ल्याकआउट
ब्ल्याकआउट फाइबरग्लास कपडा 40०% फाइबरग्लास र %०% पीवीसी विशेष प्रक्रिया मार्फत बनेको हुन्छ। यो एसिड र अल्कली जस्ता विभिन्न रासायनिक क्षति प्रतिरोधात्मक छ; हल्का उमेर प्रतिरोध र मौसम प्रतिरोधको साथ; गैर-हाइग्रोस्कोपिक, हाइड्रोफोबिक र पानी प्रतिरोधी; कडा तनाव शक्ति; डस्टप्रूफ, एन्टि-दहन, एन्टि-स्टेटिक, एन्टि-पराबैंगनी; थर्मल विस्तार र संकुचन को गुणांक सानो, राम्रो हावा पारगम्यता, राम्रो रंग स्थिरता, राम्रो आयाम स्थिरता, राम्रो उपस्थिति, प्रदूषित गर्न सजिलो छैन, सफा गर्न सजिलो, धुने पछि कुनै विरूपण, टिकाउ हो। ब्ल्याकआउट फाइबरग्लास कपडाको लम्बाई mp०mper रोल हो। प्रत्येक रोल कडा कागज ट्यूबमा प्याक गरियो।
लौ retardant फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपड़ा २ मीटर चौड़ाई
फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडा 40०% फाइबरग्लास र %०% पीवीसी विशेष प्रक्रिया मार्फत बनेको हुन्छ। यसमा ज्वाला retardant गुणहरू छन् जुन अन्य कपडाहरूमा भेटिएन। वास्तविक फाइबरग्लास कपडा विकृत वा कार्बनयुक्त हुँदैन किनकि कपडाको भित्री कंकाल जलेको पछाडि ग्लास फाइबर हो। कपडाको सामग्री आफैले निर्धारण गर्दछ कि यो लागु हुँदैन र लामो समयको लागि चापल्य बनाउँदछ। कुनै पाना, विस्तार र संकुचन <0.5% छैन। अझ बढी, यसको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छैन, प्राकृतिक आँसु प्रतिरोधको साथ, महत्त्वपूर्ण हावा प्रतिरोध र मेकानिकल गुणहरू लगातार प्रयोगको सामना गर्दछ।
उच्च गुणवत्ता एन्टि-युवी पीवीसी पर्दा फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडा
फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडा 40०% फाइबरग्लास र %०% पीवीसी विशेष प्रक्रिया मार्फत बनेको हुन्छ। यो हावामा ठोस कणहरू सोखाउँदैन र धुलोसँग मिल्दैन, जसले प्रभावकारी रूपमा धूलोलाई कम गर्न सक्छ। थप रूपमा यो एक प्राकृतिक खनिज हो र ब्याक्टेरिया वृद्धि वातावरण प्रदान गर्दैन। ब्याक्टेरियाहरूले पुन: उत्पादन गर्न सक्दैन र कपडा मोल्डे हुँदैन। यो व्यापक रूपमा विभिन्न वातावरण, जस्तै कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्टहरूको लागि प्रयोग गरीन्छ।
हामीले बनाउने अधिकतम चौडाइ m मी छ र मोटाई ०. .8 मिमी हुन्छ। फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडाको लम्बाई mp०mper रोल हो। प्रत्येक रोल कडा कागज ट्यूबमा प्याक गरियो।
सब भन्दा लोकप्रिय विन्डो ब्लाइन्ड्स फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडा
फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडा 40०% फाइबरग्लास र %०% पीवीसी विशेष प्रक्रिया मार्फत बनेको हुन्छ। लामो अवधिको सूर्य प्रकाश वातावरणमा, कपडाको र fast्ग स्थिरता फेडिंगबाट रोक्न निश्चित मानकमा पुग्न आवश्यक छ। स्पष्ट तनाव वा टेन्सिल आवश्यकता भएको उत्पादनहरूका लागि, कपडाको टेन्सिल शक्ति विचार गर्नु आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, सार्वजनिक भवनहरु मा अल्ट्रा हाई रोलर अंधा र उच्च तन्यता शक्ति संग छत पर्दा फाइबरग्लास कपडा को उपयोग गर्नु पर्छ।
यी परिस्थितिहरूमा, फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडा उत्तम छनौट हो। यसले केवल गोपनीयता मात्र सुरक्षित गर्न सक्दैन, तर वातावरण अनुकूल कपडा पनि।
शीर्ष क्वालिटी पीवीसी लेपित फाईबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडा अफिसका लागि
फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडा फाइबर ग्लास र पीभीसीबाट बनाइन्छ एक विशेष प्रक्रिया मार्फत। यो भारी धातु र हानिकारक पदार्थहरू, सुरक्षित र पर्यावरण-मैत्री, कुनै अनौंठो गन्ध, मानव शरीरलाई कुनै हानि छैन, धेरै उच्च स्थिरता, सुरुचिपूर्ण र सुन्दर, र र matching मिलान आधुनिक सजावटको लागि उपयुक्त छ।
फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडा प्राकृतिक खनिज (क्वार्ट्ज, बालुवा, सोडा, नीबू) बाट बनेको हुन्छ। यो व्यापक रूपमा विभिन्न वातावरण, जस्तै कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट र घरको लागि प्रयोग गरिन्छ। फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडाहरूको संरचना 40०% फाइबरग्लास र %०% पीवीसी, तीन तह पीवीसी र फाइबरग्लासको १ तह हो। हामीले बनाउने अधिकतम चौडाइ m मी छ र मोटाई ०. .8 मिमी हुन्छ। फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडाको लम्बाई mp०mper रोल हो।
UV ब्लैकआउट फाइबरग्लास कपडा 40०% फाइबरग्लास र %०% पीवीसी लाई सुरक्षित गर्नुहोस्
ग्लास फाइबर एक उत्कृष्ट अजैविक गैर-धातुत्मक सामग्री हो उत्कृष्ट प्रदर्शन र फाइबरग्लास सनस्क्रीन कपडाहरूको महत्त्वपूर्ण अंशको साथ। पदार्थहरू सिलिका, एल्युमिना, क्याल्शियम अक्साइड, बोरन अक्साइड, म्याग्नेशियम अक्साइड, सोडियम अक्साइड र त्यस्तै हुन्।
ब्ल्याकआउट फाइबरग्लास कपडा प्राकृतिक खनिज (क्वार्ट्ज, बालुवा, सोडा, नीबू) बाट बनेको हुन्छ। यो व्यापक रूपमा विभिन्न वातावरण, जस्तै कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट र घरको लागि प्रयोग गरिन्छ। ब्ल्याकआउट फाइबरग्लास कपडाको लम्बाई mp०mper रोल हो। प्रत्येक रोल कडा कागज ट्यूबमा प्याक गरियो। हामीले बनाउने अधिकतम चौडाइ m मी छ र मोटाई ०. .8 मिमी हुन्छ।
ठाडो ब्लाइन्ड्स फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडा घरका लागि
फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडा फाइबर ग्लास र पीभीसीबाट बनाइन्छ एक विशेष प्रक्रिया मार्फत। यो हावामा ठोस कणहरू सोखाउँदैन र धुलोसँग मिल्दैन, जसले प्रभावकारी रूपमा धूलोलाई कम गर्न सक्छ। यसले प्रभावकारी रूपमा सूर्यको किरण र अल्ट्राभायोलेट किरणहरू पनि रोक्न सक्छ जुन स्वास्थ्यको लागि लाभदायक छ। यो होटल, भिला, उच्च-अन्त निवास, विश्राम ठाउँहरू, इत्यादिका लागि उपयुक्त छ।
फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडाको लम्बाई mp०mper रोल हो। प्रत्येक रोल कडा कागज ट्यूबमा प्याक गरियो। हामीले बनाउने अधिकतम चौडाइ m मिटर छ। र मोटाई लगभग 0.38mm छ।
वाटरप्रूफ बाहिरी रोलर ब्लाइन्ड्स फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडा
फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडा 40०% फाइबरग्लास र %०% पीवीसी विशेष प्रक्रिया मार्फत बनेको हुन्छ। यो हाम्रो जीवनमा व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ। उदाहरण को लागी, सार्वजनिक भवन (व्यायामशाला, भव्य थियेटर, एयरपोर्ट टर्मिनल, प्रदर्शनी केन्द्र), कार्यालय भवन, होटल (रेस्टुरेन्ट, अतिथि कोठा, जिम, बैठक कोठा) र घर (शयन कक्ष, अध्ययन कोठा, बैठक कोठा, बाथरूम, भान्छाघर, सूर्य कोठा) , बालकनी)। यो तीन तह पीवीसी र फाइबरग्लास को एक पत्र संग रचना।
वाटरप्रूफ फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडा अफिसका लागि
फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडा 40०% फाइबरग्लास र %०% पीवीसी विशेष प्रक्रिया मार्फत बनेको हुन्छ। यसमा ज्वाला retardant गुणहरू छन् जुन अन्य कपडाहरूमा भेटिएन। वास्तविक फाइबरग्लास कपडा विकृत वा कार्बनयुक्त हुँदैन किनकि कपडाको भित्री कंकाल जलेको पछाडि ग्लास फाइबर हो। यो हाम्रो जीवनमा व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ। उदाहरण को लागी, सार्वजनिक भवन, कार्यालय भवन, होटल र घर।
फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडा तीन तह पीवीसी र फाइबरग्लासको १ तहको साथ बनाइन्छ। हामीले बनाउने अधिकतम चौडाइ m मी छ। र मोटाई लगभग 0.38mm छ। ब्लाइन्ड निर्माताहरूका लागि १००० भन्दा बढी प्रकारका र availableहरू उपलब्ध छन्। फाइबरग्लास ब्ल्याकआउट कपडाको लम्बाई mp०mper रोल हो। प्रत्येक रोल कडा कागज ट्यूबमा प्याक गरियो।
वाटरप्रूफ फाइबरग्लास रोलर ब्लाइन्ड्स ब्ल्याकआउट कपडा m मीटर चौड़ाई